ဂျေမီဗာဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် အော်စကာဆုရ ထုတ်လုပ်သူများပါဝင်မည် – Play Maker Sports Journal
ဂျေမီဗာဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် အော်စကာဆုရ ထုတ်လုပ်သူများပါဝင်မည်
May 25, 2021 playmaker Sports News 0
ဂျေမီဗာဒီအကြောင်းကိုရိုက်ကူးမယ့်ရုပ်ရှင်တွင် Goal! ၊ Goal 2! :Living The Dream စတဲ့ဘောလုံးနောက်ခံရုပ်ရှင်များတွင်ဇာတ်ညွှန်းရေးသားခဲ့တဲ့ဗြိတိန်ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာအက်ဒရီယန်ဘတ်ချပ်ကဇာတ်ညွှန်းရေးသားသွားမှာဖြစ်ပြီးအော်စကာဆုရထုတ်လုပ်သူများဖြစ်ကြတဲ့ဂါရတ်အဲလစ်အန်ဝင်း၊ဆိုင်မွန်အီဂန်နှင့်၎င်းတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ Bedlam Productions တို့ကပါဝင်မှာဖြစ်ကြောင်း The Mirror ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်တွင်ထုတ်လုပ်သူများက High School Music ၊ The Greatest Showman ၊ Baywatch တို့တွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဇက်အယ်လ်ဖရွန်ကိုစဉ်းစားထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်၎င်းတို့ဟာရောဘတ်ပက်တင်ဆင်၊ One Direction စတားလူးဝစ်တွမ်လင်ဆင်ကိုလည်းစဉ်းစားထားကြပါတယ်။
ေဂ်မီဗာဒီ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတြင္ ေအာ္စကာဆုရ ထုတ္လုပ္သူမ်ားပါဝင္မည္
ေဂ်မီဗာဒီအေၾကာင္းကို႐ိုက္ကူးမယ့္႐ုပ္ရွင္တြင္ Goal! ၊ Goal 2! :Living The Dream စတဲ့ေဘာလုံးေနာက္ခံ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ဇာတ္ၫႊန္းေရးသားခဲ့တဲ့ၿဗိတိန္ဇာတ္ၫႊန္းေရးဆရာအက္ဒရီယန္ဘတ္ခ်ပ္ကဇာတ္ၫႊန္းေရးသားသြားမွာျဖစ္ၿပီးေအာ္စကာဆုရထုတ္လုပ္သူမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ဂါရတ္အဲလစ္အန္ဝင္း၊ဆိုင္မြန္အီဂန္ႏွင့္၎တို႔ရဲ႕ကုမၸဏီ Bedlam Productions တို႔ကပါဝင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း The Mirror ရဲ႕ေဖာ္ျပခ်က္အရသိရပါတယ္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားက High School Music ၊ The Greatest Showman ၊ Baywatch တို႔တြင္ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ဇက္အယ္လ္ဖ႐ြန္ကိုစဥ္းစားထားပါတယ္။ဒါ့အျပင္၎တို႔ဟာေရာဘတ္ပက္တင္ဆင္၊ One Direction စတားလူးဝစ္တြမ္လင္ဆင္ကိုလည္းစဥ္းစားထားၾကပါတယ္။
ကမ္ဘာ့ဖလားတွင် ပါဝင်ခွင့်ရရှိရန် ချဲလ်ဆီးတွင် ဆက်ရှိနေမယ့် ဂျော်ဂျင်ဟို
ရော်နယ်ဒိုရဲ့ဖရီးကစ်စံချိန်ကို လီယွန်နယ်မက်ဆီ ရိုက်ချိုး
Best Choice Fighter (5)Friday
ချဲလ်ဆီးနောက်ခံလူတိုမိုရီကို ပေါင် ၂၅ သန်းဖြင့် မီလန် အပြီးသတ်ခေါ်ယူ